IBM Swift Sandbox, na-enye gị ohere ide Swift koodu | Esi m mac
IBM Swift Sandbox, na-enye gị ohere ide koodu Swift
IBM abanyela na Swift bandwagon na iwebata weebụsaịtị wepụtara 'IBM Swift Sandbox'. Na weebụsaịtị a ị nwere ike dee ahịrị Swift koodu na nchịkọta ederede na ekpe, na mgbe e mesịrị na-agba koodu ahụ na sava Linux, ebe nsonaazụ ahụ dị na kọlụm aka nri. Ihe a niile ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ Swift bụ ugbu a na-emeghe isi, ebee ugbu a Linux soro na iOS y oS X.
Na nke a ederede, Craig Federighi na-ekwu maka ihe mere o jiri họrọ ime Swift ka ọ bụrụ asụsụ mmalite. Nwere ike iji Swift asụsụ yana ọrụ nke ọkọlọtọ ọba akwụkwọ na 'IBM Swift Sandbox', ya mere ide ederede nsogbu mgbakọ na mwepụ na usoro (dị ka ọrụ Fibonacci ihe atụ na anyị na-etinye ihe oyiyi na mbụ) dị n'ime ngwa weebụ. Echiche ahụ yiri ngwa ahụ CodeRunner si Mac App Storema e wezụga na ọ na-agba ọsọ kpamkpam n'ígwé ojii. Dị n'okpuru usoro ndị a anyị na-etinye njikọ na CodeRunner 2, na Applọ Ahịa Mac App.
Echere m na anyị ga-ahụ ngwa ngwa na Swift, n'ihi na ọ bụ ezie 'IBM Swift Sandbox' doo otutu ihe ichoro, o gha abu ebe magburu onwe ibido imuta ihe. Ọ dịkwa mma na IBM na-akwado Swift site na mmalite. Apple na IBM enweela ezigbo nkwado azụmahịa, dịka ọmụmaatụ n'isiokwu a nke m dere n'ọnwa gara aga ebe m gwara gị nke ahụ Macs na-eme ka ndụ dịkwuo mfe maka IBM, ma ọ bụ ọbụna ebee IBM na-enye ndị ọrụ ya Apple Watch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » IBM Swift Sandbox, na-enye gị ohere ide koodu Swift
Otu esi etinye faịlụ na ozi na Ozi maka iOS 9
Xiaomi na-eme ka iPhone Plus dịkwuo ọnụ ala na iPad Obere